အဆိုပါ BlackBerry ကိုဂန္ထဝင် BlackBerry ကို diehards ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြစမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာကီးဘုတ်ရဲ့သေးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်, အလျင်မြန် keys ကို Touch-စာရိုက်ဖြစ်နိုင်စေနဲ့ menu ကိုခလုတ်အညွှန်းအရှိန်မြှင့်.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “BlackBerry ကိုဂန္ထဝင်ပြန်လည်သုံးသပ်: ဖုန်း diehards ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြ” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com အင်္ဂါနေ့ 20 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2015 09.50 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါ BlackBerry ကိုဂန္တဝင်, နာမတျောအအကြံပြုအဖြစ်, ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးဘာလုပ်တယ်မှကနေဒါကုမ္ပဏီရဲ့ပြန်လာဖြစ်ပါတယ်: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု-အာရုံစူးစိုက်စမတ်ဖုန်း.
၎င်း၏ကြေညာချက်တွင်, BlackBerry ကိုတိုကျရိုကျအဂန္ထဝင်ဒုတိယ Bold ကြွလာခဲ့ကွောငျးကိုကြွေးကြော်, နောက်ဆုံး Update လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းကို 2011 နှင့်တဦးတည်းအများဆုံး diehard ပရိတ်သတ်တွေဆဲမှတွယ်ကပ်.
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်နှင့်အတူအီးမေးလ်ပို့ခြင်းများအတွက်ဖုန်းကိုအိပ်မက်သည်ဆိုပါက, ဒီရုံကဖြစ် ... ဒါပေမဲ့အခြားအလူတိုင်းအတွက်စေခြင်းငှါ,, ဒီအခြားအချိန်မှအကောင်းဆုံးကိုစွန့်တဲ့ curio ဖြစ်ပါသည်?
ဂန္ထဝင် Bold ဒီဇိုင်း
နောက်ကျောတဲ့အပေါ်ယံဖြစ်ပါသည်, ညှစ်ရသောအခါအနည်းငယ် flexes သော grippy ပလပ်စတစ်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
သူတို့တစ်တွေအသစ် Bold အဖြစ်ဂန္တဝင်ဖော်ပြခဲ့ကြသောအခါ BlackBerry ကိုနောက်နေမဟုတ်ခဲ့ကြ. လူအများစုဟာခက်ခဲပထမတစ်ချက်မှာနှစ်ဦးအကြားခြားနားချက်ကိုပြောပြရန်ဖိအားပေးပါလိမ့်မယ်.
အဆိုပါဂန္ထဝင်သစ်တစ်ခုသတ္တုတီးဝိုင်းရှိပါတယ်, အစွန်းပတ်လည်မှာပြန်ချိတ်ပိတ်, သောဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့မဟုတ်လျှင်ဘက်ထရီကိုဆိုလိုသည်. ပိုပြီးသိုလှောင်မှုကိုထည့်သွင်းများအတွက် nano SIM ကဒ် slot ပါနဲ့ microSD card slot ကဖုန်းရဲ့ဘေးထွက်၌ရှိကြ၏.
ဖုန်း၏အောက်ခြေသုံးတွင်းရှိပါတယ်, စမတ်ဖုန်းအားသွင်းခြင်းနှင့်ထပ်တူပြုခြင်းများအတွက်အသေးစားကို USB cable ကိုတ, စပီကာဘို့တ, စမတ်ဖုန်းများအတွက်လျောက်ပတ်လျှင်မခြွင်းချက်သော, တစ်မိုက်ခရိုဖုန်းများအတွက်အခြား.
တစ်နိုးထ / သော့ခတ် device ကိုကြိုဆိုပြန်လာစေသည်အဖြစ်ကာကွယ်ပေးသည်နှင့်ပြုမူသော BlackBerry ကိုစွပ်အိတ်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အဆိုပါဂန္ထဝင် 10.2mm နှင့် 177g မှာခေတ်သစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစမတ်ဖုန်းများအတွက်အတော်လေးအထူနှင့်လေးလံသောဖြစ်ပါသည်. နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Bold 11.4mm အထူကြီးနှင့် 107g အလေးချိန်နှင့် iPhone66.9mm အထူသည်နှင့် 129g အလေးချိန်. အများစုမှာထိပ်တန်းအဆုံး Android ဖုန်းများအလားတူစာရင်းဇယားရှိသည်နှင့်ပင်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်က Motorola Moto G 143g မှာလျော့နည်းအလေးချိန်.
အဆိုပါ BlackBerry ကိုတညျဆောကျခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ခံစားရ, သို့သော်, ကုမ္ပဏီ၏အဟောင်းတွေမော်ဒယ်အဖြစ်အများအပြားကိုပြု၏ကြာရှည်ဖို့ဒီဇိုင်း. နောက်ကျောနှင့်နှစ်ဖက်လည်းလက်တော်၌ရှိတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချချုပ်ကိုင်ထားပေး. တလက်အဂန္ထဝင်အသုံးပြုခြင်းလွယ်ကူသော BlackBerry ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ခလုတ်များ၏ကြိုဆိုပြန်လာမှကျေးဇူးတင်စကားနှင့် optical စာစောင်ကိုခလုတ်ဖြစ်ပါသည်.
မျက်နှာပြင် 3.5in နှင့်စတုရန်းဖြစ်ပါသည်, တစ် pixel သိပ်သည်းဆနှင့်အတူ 294 လက်မအရွယ်ကတော့ pixels per (ppi) - ဝေးထိုကဲ့သို့သောက Nexus အဖြစ်ကြီးမားသော Android စမတ်ဖုန်းများ၏ 493ppi-ပေါင်းဖန်သားပြင်ကိုအောက်တွင်6နှင့် iPhone တည်းဟူသော 326ppi 6.
အဆိုပါမျက်နှာပြင် 245ppi Bold ထက်ပြတ်သားသည်, သို့သော်, နှင့်စာသားနဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုမှုများအတွက်လုံလောက်ပြတ်သားပေါ်လာ. သာသေးငယ်တဲ့စာသားကိုအပေါ် pixels ကိုပြသနှင့်အနားသိသာ fuzzy ဖြစ်လာကြဘူး. Images ကိုရောင်စုံကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ကျယ်ပြန့်ထောင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်.
ကီးဘုတ်ပြပွဲ၏အစစ်အမှန်ကြယ်ပွင့်သည်. ဒါဟာငြင်းခုံဖွယ်ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်ဖြစ်ပါသည်, ပြောင်းကုန်ပြီနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံ, သင်္ကေတများနှင့်အခြားသော့များ, သောစာသားကိုဝင်ရောက်စေသည်, နံပါတ်များနှင့် punctation လွယ်ကူသော. ဒါဟာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ၏ကီးဘုတ်ပေါ်သိသိသာသာတိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါဂန္ထဝင်ရဲ့ကီးဘုတ်သေးအကောင်းဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ touchscreen ကကီးဘုတ်အသုံးပြုသူများကိုယှဉ်ပြိုင်ပလက်ဖောင်း၏အဆင့်မြင့် Auto-မှန်ကန်သောနှင့် dynamic ကီးဘုတ်ဇာတ်ကောင်ကိုလက်လွတ်စေခြင်းငှါ,. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
Screen ကို: 3.5720 အတွက်×720 (294ppi)
processor: 1.5 GHz Dual-core Qualcomm Snapdragon S4 ကို Plus အား
သိုလှောင်ခြင်း: 16GB ကိုပေါင်းမိုက်ခရို SD ကတ်
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: BlackBerry ကို 10.3
ကင်မရာကို: 8လွှတ်တော်အမတ်နောက်ဘက်ကင်မရာက, 2အမတ် front-facing ကင်မရာကို
connectivity ကို: LTE ကို, ဝိုင်ဖိုင်, NFC ကို, ဘလူးတုသ် 4.0, FM ရေဒီယိုနှင့် GPS စနစ်
ဒိုင်မန်းရှင်း: 131 x က 72.4 x က 10.2mm
ဘေးထွက်တစ် microSD card slot နှင့် nano SIM ကဒ်အထိုင်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အဂန္ထဝင်မှာအသုံးပြုတဲ့အချစ်ပ်များနှင့်ပရိုဆက်ဆာအမြန်နှုန်းသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်မှုများအတွက်မည်သည့်ဆုအနိုင်ရသွားကြသည်မဟုတ်. သူတို့ကအဟောင်းတွေချစ်ပ်များမှာ, အရာစတုရန်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထက်ဂန္ထဝင်နှေးကွေးစေသည်.
ဖုန်းကိုလုပျဆောငျဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်အဘယ်သို့သောအကြောင်းအရာ - process ကိုအီးမေးလ်က, စာသားများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများ - ထိုဂန္ထဝင် task ကိုမှတက်သည်. Amazon ရဲ့ app store ကိုတဆင့် BlackBerry ကိုရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ကြောင်းဂိမ်းများနှင့်သူတို့အားတောင်းဆို apps များကစားဘို့ (ကအပေါ်ကိုပိုမိုနောက်ပိုင်းတွင်), အဂန္ထဝင်ရုန်းကန်လိမ့်မည်.
တချို့ apps များစတင်, မြေပုံ app ကိုတူ, Facebook သို့မဟုတ် Twitter ကို, နာကျင်ကျိန်းစပ်စေနိုင်ပါတယ်ကြောင်းသုံးနေပြီတစ်စက္ကန့်အနည်းငယ်နှင့်အတူတစ်ဦးအနေဖြင့်ယူနိုင်ပါသည်. တခါအပြေးသူတို့ကိုအကြား switching snappy ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံထိုကဲ့သို့သောအိုင်ဖုန်းအဖြစ်ပြိုင်ဘက်ထက်သိသာနှေးသည် 6, ကို Nexus6ပင် Motorola က Moto G.
အဆိုပါဂန္ထဝင်တစ်ခုတည်းတာဝန်ခံအပေါ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်လေးလံသောအသုံးပြုမှုဟာအစိုင်အခဲနေ့ကကြာရှည်ဦးမည်, အဆက်မပြတ်အီးမေးလ်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ပေးပို့ခြင်း, Twitter နဲ့ Facebook ကစစ်ဆေးနေ, Spotify ကနေတဆင့်အနည်းငယ် streaming များဂီတနှင့်အတူ.
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအရည်အသွေးအစိုင်အခဲခဲ့သည်, အဂန္ထဝင်ရဲ့ဧည့်ခံသကဲ့သို့, ကောင်းစွာ 4G, 3G signal ကိုတက်ကောက်နေပြိုင်ဘက်ကိုက်ညီသော.
သာ. ကောင်း၏ software ကို
BlackBerry ရဲ့ '' Hub '' – ကစုစည်းတဲ့စာပုံးနဲ့သတိပေးချက် system ကို – သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံး features တွေကိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အဆိုပါဂန္ထဝင် BlackBerry ကို၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းပြေး 10 နှစ်ဦးစလုံး BlackBerry ရဲ့နဲ့ Amazon ရဲ့ App စတိုးမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူဆော့ဖျဝဲ. အဆုံးစွန်သောက Android app များကိုတစ်ရွေးချယ်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေး, BlackBerry ကိုတဆင့်တိုက်ရိုက်ရှိနိုင်ပါ apps များ၏ချို့ယွင်းချက်ကိုကျော်လွှားဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်သော.
စိုးမိုးရေးအချို့ခြွင်းချက်ရှိပါတယ်နေစဉ်, မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဆိုလိုသည်, ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်လုံခြုံ apps များ BlackBerry ကိုကမ္ဘာ့ဖလားမှလာနဲ့ဖျော်ဖြေရေး app များကိုအမေဇုံကနေလာ. စနစ်အတွင်းအဆိုပါအပြစ်အနာအဆာ Amazon ရဲ့ app store ကိုသာဘီလျံပေါင်းက Android app များ၏သေးငယ်တဲ့ရွေးချယ်ရေးရှိပါတယ်ကြောင်း.
ထိုကဲ့သို့သော Spotify အဖြစ် Apps ကပ, Feedly နှင့်အခြားသူများတစ်လျောက်ပတ်သောရွေးချယ်ရေး Amazon ကတဆင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒီလို Netflix နှင့်ဘီဘီစီ iPlayer ကဲ့သို့အချို့မဟုတ်.
အဆိုပါ BlackBerry ကို Hub တစ်နေရာတည်းသို့အားလုံးစာတိုပေးပို့အသိပေးချက်များကိုစုဆောင်းနှင့်အခြား platform ပေါ်တွင်မဆိုတခြား "စုစည်း်စာပုံး" ထက်ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်. အဆိုပါ BlackBerry ကိုဆဲအခြားလူတို့အားလွယ်ကူရိုးရှင်းသည့် text ပေးပို့ခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးစက်ဖြစ်ပါတယ်.
BlackBerry ရဲ့ Universal ရှာရန်လည်းအစိုင်အခဲနှင့် BlackBerry ကိုလက်ထောက်များပါဝင်သည်, အရာပေမဲ့အတော်လေးအခုတော့ Siri သို့မဟုတ် Google ၏တူညီသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် panache ရှိသည်ပါဘူး, လက်ကို-အခမဲ့ထိန်းချုပ်ရေးနှင့်သတ်ပုံများအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်.
အဆိုပါ browser ကိုအများကြီးအဟောင်းတွေဘလက်ဘယ်ရီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တိုးတက်လာသည်, သို့သော်ထိုကဲ့သို့သော The Guardian ကအဖြစ်ရှုပ်ထွေးတဲ့က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူရုန်းကန်, တစ်ခုခု Apple ရဲ့ Safari နဲ့ Google ရဲ့ Chrome ကိုခေတ်သစ်စမတ်ဖုန်းအပေါ်မကျင့်.
အဆိုပါဂန္ထဝင်ရဲ့ကင်မရာအကြောင်းကိုအိမ်မှာရေးသားဖို့ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့်အလုပ်ပေါ့ပေါ့ဓါတ်ပုံအဘို့ပြုရလိမ့်မည်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
အဆိုပါရှစ်-megapixel ကင်မရာအစိုင်အခဲသည်, မြင်ကွင်းကျယ်နှင့်အတူ, ယှဉ်ပြိုင်နှင့်အတူတန်းတူဖို့ကဆောင်ခဲ့ကြောင်းမြင့်မားတဲ့ dynamic range ကိုနှင့်အချိန်အဆိုင်း features တွေ. Images ကိုကောင်းသောအလင်းရောင်အခြေအနေများအတွက်လျောက်ပတ်များမှာ, ဒါပေမယ့်ကင်မရာအနိမ့်အလငျး၌ရုန်းကန်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်ရန်အချိန်ကြာနိုင်.
အဆိုပါ front-facing နှစ်ခု-megapixel ကင်မရာပျှမ်းမျှနှင့်အသေးစိတ်နှင့်အရောင်တိကျမှန်ကန်မှုကင်းမဲ့ကြောင်းသာမန် selfies ထုတ်လုပ်.
အဆိုပါ BlackBerry ကိုဂန္ထဝင်တစ်ဦးမိုဘိုင်းဖုန်းစာချုပ်မပါဘဲ£ 350 ကုန်ကျ, သော£ 539 က iPhone undercuts6£ 189 နှင့်£ 499 ကို Google က Nexus အားဖြင့်6£ 149 အားဖြင့်. သို့သော်ထိုသို့£ 100 ကို Motorola က Moto G ၏သုံးဆစျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်, သောမကြာသေးမီက BlackBerry ကိုအစားထိုးအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားဖြင့်ဝယ်ခံရဖို့စတင်ခဲ့ပြီ.
အဆိုပါဂန္ထဝင်အများအပြားယှဉ်ပြိုင်စမတ်ဖုန်းနှင့်မတူဘဲတစ်လက်တော်၌သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်. ဓါတ်ပုံ: ရှမွေလသည် Gibbs / The Guardian က
သို့သော်ဂန္ထဝင်ကွာအိုင်ဖုန်းဒါမှမဟုတ်အများအပြားအစိုင်အခဲက Android စမတ်ဖုန်းများမှလူစုံစမျးဖို့နည်းနည်းပဲရှိပါတယ်, အရာအချို့ကိုစျေးနှုန်း၏သုံးပုံတပုံရှိပါတယ်. ဒါဟာပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သုံးစွဲနှေးကွေးခြင်းနှင့်တစ်နည်းနည်းရှုပ်ထွေးခံစားရနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ခံစားအတွက် antiquated ဖြစ်ပါတယ်.
အဆိုပါဂန္ထဝင်ထိုသို့ပြုမှထွက်သတ်မှတ်အဘယျသို့ရရှိကာ Bold သို့မဟုတ်အခြားအဟောင်းတွေ BlackBerry ကို၏အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးကိုခံထိုက်သောသူအဆင့်မြှင့်ဖြစ်ပါသည်. သာ. ကောင်း၏ရွေးချယ်စရာအခြားသူလူတိုငျးအတှကျရရှိနိုင်ပါသည်.
အကောင်းအဆိုး: အကောင်းဆုံးကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကီးဘုတ်, အစိုင်အခဲတည်ဆောက်, ကောင်းသောတစ်လောကလုံးစာပုံး, OK ကိုကင်မရာက
Cons: ဂိမ်းများနှင့်ဖျော်ဖြေရေး app များမရှိခြင်း, Android app များနှင့်အတူရောထွေး interface ကို, နှေးကွေးစွမ်းဆောင်ရည်ကို, မိုးသည်းထန်စွာနှင့်အထူ
• Motorola က Moto G ပြန်လည်သုံးသပ် - ကိုအကောင်းဆုံးသေးငယ်တဲ့စမတ်ဖုန်းရုံ£ 135 ဖြစ်ပါတယ်
• Motorola က Moto G 2014 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: အကောင်းဆုံးကိုအားလုံးဘက်စုံဘတ်ဂျက်စမတ်ဖုန်း
• LG က G3 ပြန်လည်သုံးသပ်ရေး: ယနေ့အထိအရှိဆုံးအသုံးဝင်သော Phablet ကို
• Motorola က Moto X ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: သင့်ရဲ့ dulcet တန်ချိန်ထွက်သည်ကိုနားထောငျ
• Sony Xperia Z3 ပြန်လည်သုံးသပ်: အလွန်ကြီးစွာသောဘက်ထရီသက်တမ်းနှင့်အရည်အသွေးကင်မရာက
စက်တင်ဘာ 9, 2019
© 2019 မူပိုင်ခွင့် Newsrule.com